ကျဆုံးသွားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကသူရဲကောင်းတွေအတွက် မိုးထဲလေထဲမှာတောင် ဆုတောင်းပွဲလုပ်နေကြတဲ့ တောင်ကိုရီးယားပြည်သူများ…. – Cele Oscar
ကျဆုံးသွားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကသူရဲကောင်းတွေအတွက် မိုးထဲလေထဲမှာတောင် ဆုတောင်းပွဲလုပ်နေကြတဲ့ တောင်ကိုရီးယားပြည်သူများ….
လက်ရှိ မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ အခြေအနေ တွေကို နိုင်ငံတကာ သတင်း မီဒီယာတွေ ကလည်း အချိန် နဲ့ တစ်ပြေး ညီ ဖော်ပြနေ ကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ မြန်မာ နိုင်ငံက ပြည်သူတွေ နဲ့ အတူ တစ်သားတည်း ရပ်တည်ပြီး အားပေး စကား အမြဲတမ်း ပြောကြား ပေးနေတဲ့ နိုင်ငံတွေ ထဲမှာ တော့ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံကလည်း အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ် ။ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံက သူတို့ တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ နည်းလမ်း မျိုးစုံ နဲ့ ကြိုးစား ပြီး မြန်မာပြည်သူ တွေကို ဖေးမကူညီနေတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံ ရဲ့ နာမည်ကြီး မီဒီယာ တွေ ကလည်း မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွား နေတဲ့ အဖြစ် အပျက်တွေ ကို အားလုံး သိအောင် ဖော်ပြ ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ တောင်ကိုရီးယား ပြည်သူတွေ ကလည်း ဓာတ်ပုံ ပြပွဲ၊ သံပုံးတီး Campaign၊ ထဘီအလံလွှင့် Campaign စတဲ့ လူထု လှုပ်ရှားမှု တွေမှာ တက်တက်ကြွကြွပါ ဝင်ပေးခဲ့ ကြပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့က ကျဆုံးသွားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက သူရဲကောင်းတွေ အတွက်လည်း ထပ်တူ ထပ်မျှ စိတ်မ ကောင်းဖြစ်နေကြတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ကလည်း တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံ အောက်ပိုင်း (ဂွမ်ဂျူးကြီး) မှာရှိတဲ့ ပြည်သူ တွေက တောင်ကိုရီးယား ရောက် မြန်မာနိုင်ငံ သားတွေ နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဆုတောင်းပွဲ တစ်ခုကို ပြုလုပ် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ မိုးထဲ လေထဲမှာ တောင် မြန်မာ ပြည်သူ ပြည်သားတွေ နဲ့ အတူ ရပ်တည်ပြီး ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခဲ့ ကြတဲ့ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံသား တွေ ရဲ့ပုံရိပ်က အခု ဆိုရင် လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ တွေထက်မှာ ပျံ့နှံ နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေ ကလည်း တောင်ကိုရီးယား လူမျိုးတွေ ရဲ့ကြိုးစားအား ထုတ်မှုတွေ ကို ကြည့်ပြီး ချီးကျူး လေးစား နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
လကျရှိ မှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့ မွနျမာနိုငျငံ ရဲ့ အခွအေနေ တှကေို နိုငျငံတကာ သတငျး မီဒီယာတှေ ကလညျး အခြိနျ နဲ့ တဈပွေး ညီ ဖျောပွနေ ကွတာ ဖွဈပါတယျ ။ မွနျမာ နိုငျငံက ပွညျသူတှေ နဲ့ အတူ တဈသားတညျး ရပျတညျပွီး အားပေး စကား အမွဲတမျး ပွောကွား ပေးနတေဲ့ နိုငျငံတှေ ထဲမှာ တော့ တောငျကိုရီးယား နိုငျငံကလညျး အပါအဝငျ ဖွဈပါတယျ ။ တောငျကိုရီးယား နိုငျငံက သူတို့ တတျနိုငျတဲ့ ဘကျကနေ နညျးလမျး မြိုးစုံ နဲ့ ကွိုးစား ပွီး မွနျမာပွညျသူ တှကေို ဖေးမကူညီနတော ဖွဈပါ တယျ ။
တောငျကိုရီးယား နိုငျငံ ရဲ့ နာမညျကွီး မီဒီယာ တှေ ကလညျး မွနျမာ နိုငျငံမှာ ဖွဈပှား နတေဲ့ အဖွဈ အပကျြတှေ ကို အားလုံး သိအောငျ ဖျောပွ ပေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ တောငျကိုရီးယား ပွညျသူတှေ ကလညျး ဓာတျပုံ ပွပှဲ၊ သံပုံးတီး Campaign၊ ထဘီအလံလှငျ့ Campaign စတဲ့ လူထု လှုပျရှားမှု တှမှော တကျတကျကွှကွှပါ ဝငျပေးခဲ့ ကွပါသေးတယျ။ ဒါ့အပွငျ သူတို့က ကဆြုံးသှားတဲ့ မွနျမာနိုငျငံက သူရဲကောငျးတှေ အတှကျလညျး ထပျတူ ထပျမြှ စိတျမ ကောငျးဖွဈနကွေတာ ဖွဈပါ တယျ ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျကလညျး တောငျကိုရီးယား နိုငျငံ အောကျပိုငျး (ဂှမျဂြူးကွီး) မှာရှိတဲ့ ပွညျသူ တှကေ တောငျကိုရီးယား ရောကျ မွနျမာနိုငျငံ သားတှေ နဲ့ ပူးပေါငျးပွီး ဆုတောငျးပှဲ တဈခုကို ပွုလုပျ ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ မိုးထဲ လထေဲမှာ တောငျ မွနျမာ ပွညျသူ ပွညျသားတှေ နဲ့ အတူ ရပျတညျပွီး ဆန်ဒ ထုတျဖျောခဲ့ ကွတဲ့ တောငျကိုရီးယား နိုငျငံသား တှေ ရဲ့ပုံရိပျက အခု ဆိုရငျ လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာ တှထေကျမှာ ပြံ့နှံ နတော ဖွဈပါတယျ ။ မွနျမာနိုငျငံက ပွညျသူတှေ ကလညျး တောငျကိုရီးယား လူမြိုးတှေ ရဲ့ကွိုးစားအား ထုတျမှုတှေ ကို ကွညျ့ပွီး ခြီးကြူး လေးစား နကွေတာ ဖွဈပါတယျ ။